Govt Lowers Vehicle Registration Fees | Myanmar Business Today
HomeAutomobileGovt Lowers Vehicle Registration Fees
The Road Transport Administration Department (RTAD) has lowered the vehicle registration fees for imported private used cars starting from August7as part of the covid-19 relief programs to mitigate the impact of the COVID-19.
For the vehicles with the engine power of 1,350 CC and below, the department reduced the registration fees to 15 percent from 30 percent, and to 25 percent from 50 percent for 1,351-2,000 CC engine power, 40 percent from 80 percent 2,001-5,000 CC and 60 percent from 120 percent for 5,000 CC and above.
Before that, the government also cut the taxation levied on imported vehicles to 20 percent from 30 percent for vehicles with the engine power of 2000 CC and below, and to 30 percent from the previous 40 percent for vehicles with the engine power of 2001 CC and above.
လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် ပြည်ပတင်သွင်း ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခနှုန်းထားများ ဖြေလျှော့ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သြဂုတ် ၇ ရက်တွင် ကြေညာသည်။
COVID-19 ကြောင့်ဖြစ် ပေါ်လာသော စီးပွားရေးကျဆင်း မှုများကို ကုစားသည့်အနေဖြင့် လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် မူလတန်ဖိုး(FOB)အပေါ်ကောက် ခံလျက်ရှိသည့် ပြည်ပတင်သွင်း ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခ နှုန်းထားများ ကို သြဂုတ် ၇ရက်မှ ကစ၍ လျှော့ချ ကောက်ခံမည်ဖြစ် ကြောင်းထုတ်ပြန်သည်။
လူစီးယဉ်အမျိုးအစား ၁၃၅၀ စီစီနှင့် အောက် ကို ၃၀ မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊လူစီးယဉ်အမျိုးအစား ၁၃၅၁ စီစီမှ ၂၀၀၀ စီစီအထိ ၅၀ မှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလူစီးယဉ်အမျိုးအစား ၂၀၀၁ စီစီမှ ၅၀၀၀ စီစီအထိ ၈၀ မှ ၄၀ ရာခိုင် နှုန်းနှင့် လူစီးယဉ်အမျိုးအစား၅၀၀၁ စီစီနှင့် အထက် ၁၂၀ မှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖြေလျှော့ကောက်ခ့ခဲ့သည်။
မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ခြင်းအခွန်အ ကောက်လျှော့ချမှုကို အစိုးရက သြဂုတ် ၁ရက်က ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ဖြေ လျှော့ခဲ့သည်။
သြဂုတ် ၁ရက်က လျှော့ချခဲ့သည့်အ ကောက်ခွန် နှုန်းထားတွင် ပြည်ပမှ တင်သွင်း သည့် လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအ တွက် အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၀၀၀ စီစီ နှင့်အောက်ကို အကောက်ခွန်နှုန်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၀၀၁ စီစီနှင့် အ ထက်ကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၀ ရာ ခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Previous article Five Octane 92 Mini Refineries to Be Built in Magway
Next articleGovt to provide financial aids to pregnant mothers